नाला करुणामयको जात्रा (१२ तस्बिर)
विशेष प्रतिक्रिया दिनुहोस्
बाह्रखरी - बुधबार, चैत १८, २०७७
तस्बिरहरु : अभिषेक महर्जन/बाह्रखरी ।
काठमाडौं । प्राचीन काठमाडौं उपत्यकाका चार प्रमुख करुणामयहरुमध्ये एक मानिने सृष्टिकान्त लोकेश्वर हाल काभ्रेको नालामा रहेको छ । नालामा स्थापित भएकोले सृष्टिकान्त लोकेश्वर, नाला करुणामयको नामले प्रसिद्ध छ ।
पुण्यमती नदी किनारमा अवस्थित यस मन्दिर नेपाली शैलीमा निर्माण गरिएको छ भने नाला करुणामय पूर्व दिशा फर्केर ध्यान मुद्रामा रहेको छ । सृष्टिकान्त लोकेश्वर नालामा कसरी स्थापित भयो भन्नेबारे विभिन्न किंवदन्तीहरु पाइन्छ ।
नाला करुणामयको हरेक वर्ष नेपाल संवत्अनुसार चिल्लागा पारुको दिन अर्थात् होली पूर्णिमाको भोलिपल्ट न्हवं गरिन्छ । न्हवंमा महास्नान गराइसकेपछि उनको प्राणलाई ब्रम्हकलशमा सारेर भोलिपल्ट मूर्तिमा रङरोगन गरिन्छ । त्यसपछि राति उनको दशकर्म पूजा गरी तृतीयाको दिन खटमा राखी नगर परिक्रमा गराइ जात्रा गर्ने परम्परा छ । नाला करुणामयको दर्शन गर्नाले अष्टभय नाश हुने र निरोगी हुने जनविश्वास रहेको छ ।
थप तस्बिर हेर्नोस्
बुधबार, चैत १८, २०७७ मा प्रकाशित
युवराज नयाँघरे भालेको डाकैमा छोडियो तिप्ल्याङ । राति सल्लाह सुनिएथ्यो, ‘मास्तिर गर्मी लागिसक्यो । भएका बाक्ला लुगा थान्कोमान्को लगाऔँ !’ तर, जति–जति बिहान... ८ घण्टा पहिले
घनश्याम पथिक घरमा सबैको फर्‍याकफुरुक र दौडधुप बेग्लै छ । बुवा र दादा ढकने पकाउने बन्दोबस्तमा लाग्नुभयो । आमा र फुपू... ९ घण्टा पहिले
हाम्रा बच्चालाई मोटुपत्लु कहिलेसम्म देखाइरहने ?
काठमाडौं । चलचित्र क्षेत्रको सर्वोच्च संस्था चलचित्र विकास बोर्डको आवश्यकता र औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने धेरै चलचित्रकर्मीहरु छन् । बोर्डको... १० घण्टा पहिले
देश डुलेको साइकल !
देवेन्द्रका हजुरबा साइकल चढ्थे । उनका बुवा पनि साइकल चढेरै काममा सहर आउँथे । उतिखेर काठमाडौंको उत्तरपूर्वी काँठक्षेत्र आरुबारीका बासिन्दा... ११ घण्टा पहिले
सीएनएन । लुइ भुटानको विमान आकारको लक्जरी ह्यान्डब्याग ३९ हजार डलर अर्थात नेपालको ४६ लाख रुपैँयाभन्दा धेरैमा बिक्री भएको छ... २३ घण्टा पहिले
चार मन्त्रीले लिए शपथ
काठमाडौं । पुनर्नियुक्ति पाएका ४ मन्त्रीहरुले पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेका छन् । शुक्रबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति... २३ घण्टा पहिले